कोरोना महामारी बीच मनोभावनाको नि:शुल्क मनोपरामर्श सेवा अब घरै बसेर वेबसाइट र मोबाइल एप मार्फत लिन सकिने । अर्घाखाँचीबुलेटिन
| २०७८ सावन ३२ गते ०२: ४६ मा प्रकाशित
पछिल्लो दुई वर्षदेखि विश्वभरका मान्छेहरु कोरोना संक्रमण र यसका असरबाट पीडित छन् । यस्ता महामारीको बेला विश्वभर नै मानसिक समस्या वृद्धि भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणको यो बेला समस्या समाधानको लागि विज्ञसँग सिधै भेट्न पनि गाह्रो छ । नेपालमा पनि मेन्टल हेल्थका समस्या वृद्धि भएका छन् ।
यस्तै समस्या समाधान गर्नका लागि मेन्टल हेल्थ, वेलनेस र करियर सम्बन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउन अनलाइन सेवा सुरु भएका छन् । त्यसमध्येको एक हो मनोभावना सेवा ।
पिपुल डेभलपमेन्ट ल्याब (पीडीएल)ले मोबाइल एप र वेबसाइटको माध्यमबाट मेन्टल हेल्थ र साइको थेरापी सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ ।
यसको लागि पिपुल डेभलपमेन्ट ल्याबको वेबसाइट मनोभावना डट कम र एन्ड्रोइड एपमा मनोभावना सेवा उपलब्ध रहेको पीडीएलका संस्थापक किशोर अधिकारीले बताए ।
संस्थापक किशोर अधिकारी - प्रबन्ध निर्देशक उकेश राज श्रेष्ठ
‘अनलाइनबाट मनोभावना सम्बन्धि खासगरी मेन्टल हेल्थ, वेलनेस, करियरसम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउँछौं,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले एन्डोइड एप्लिकेसनमा मनोभावना र मनोभावना डटकममा यो सेवा उपलब्ध छ ।’
हुन त मनोभावना सेवा सुरु भएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर, पूर्ण रुपमा अनलाइन सेवा सुरु हुन सकेको थिएन । पूर्णरुपमा मनोभावनाको अनलाइन सुरु भएको दुई हप्ता र एप्लिकेसनमा आएको एक हप्ता भएको छ । अहिलेसम्म २ सय जनालाई मनापरामर्श सेवा उपलब्ध गराइसकेको अधिकारीले बताए ।
यस्तो सेवा खासगरी नेपालको सहरी क्षेत्रमा बस्ने, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, मध्यपूर्वका देशहरुमा बस्ने धेरै लिने गरेको अधिकारीले बताए । ति ठाउँमा बस्नेहरु धेरै व्यस्त, तनावमा पनि हुने भएकाले बेलाबेलामा यस्ता सेवा लिन पर्ने उनको भनाइ छ।
मेन्टल हेल्थ समस्या भएका, तनाव बारम्बार भइरहने, पारिवारिक समस्या भएका व्यक्तिहरुले यो सेवा लिनुपर्छ ।
त्यसैले उनले मेन्टल हेल्थ समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । कोभिडको कारणले पनि मेन्टल हेल्थका समस्या बढेको उनी बताउँछन् । अहिले परामर्श विज्ञ भेट्न पनि गाह्रो छ ।
मेन्टल हेल्थ समस्या नभएका तर केही न केही इमोसनल इस्यु भइरहने, झैझगडामा पर्ने, आफैलाई पनि नराम्रो लागिरहनेलाई पनि यो सेवा उपलब्ध रहेको अधिकारीले बताए ।
साइको थेरापी र काउन्सिल भनेको प्रोसस भएको र समस्या पत्ता लगाएर समस्या समाधान गरिने उनी बताउँछन् । मेन्टल हेल्थको विषय औषधिले मात्र नभएर परामर्श पनि समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने अधिकारी बताउँछ ।
मनोभावनाबाट मनोपरामर्श सेवा लिनको लागि दुई अप्सन छन् । पहिलो मनोभावना डट कम र अर्को हो मोबाइल एप मनोभानाव । अहिले मोबाइल एप एन्ड्रोइडमा मात्र उपलब्ध छ ।
अनलाइनमा गइसकेपछि तपाईंले आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्छ । त्यसपछि तपाईलाई केही सामान्य प्रश्नहरु सोधिन्छ । ति प्रश्नपछि तपाईंले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ ।
लगइन भइसकेपछि तपाईंले दिएको प्रश्नको उत्तरको आधारमा तपाईंलाई आवश्यक पर्ने मनोपरामर्श विज्ञ उपलब्ध गराइन्छ । जुन तपाईंको समस्या समामाधान गर्ने विज्ञ हुनेछन् ।
तपाईं दर्ता हुने बित्तिकै म्यासेज आदनप्रदान सेवा उपलब्ध हुन्छ । जुन पाँच दिनसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । तपाईंले म्यासेज पठाएर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र हरेक दिन तपाईंको म्यासेज हेरेर विज्ञबाट समाधानका उपाय बताइन्छ । यो सेवा पाँच दिनसम्म निशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।
अधिकारीकाअनुसार यो निशुल्क सेवा वेबसाइट वा एपमा पहिलो पटक दर्ता भएका प्रयोगकर्तालाई पाँचसम्म रहेको छ । पाँच दिनपछि म्यासेजबाट लिने सेवा बन्द हुन्छ ।
त्यसपछि उसले उक्त काउन्सिल सेवा निरन्तर गर्न चाहेमा अनलाइनबाट उपलब्ध हुने अन्य प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ । निशुल्क म्यासेज बन्द भएपछि तपाईले थप शुल्क तिरेर म्यासेजबाट पनि परामर्श लिन सक्नुहन्छ । जसको लागि एक हप्ताको लागि ६ सय ३० रुपैया शुल्क तोकिएको छ।
तपाईंले अब अनलाइनमा ‘वान टु वान सेसन’ पनि लिन सक्नुहुन्छ । यसको बेवसाइट वा एप्लिकेसनमा जुम जस्तै ‘फेस टु फेस’ कुरा गर्न सकिने सिस्टम उपलब्ध छ । यो बुक गरिसकेपछि उक्त सेवा लिन सकिन्छ । यस सेवाको लागि एक घण्टाको एक हजार शुल्क तोकिएको छ ।
अर्को भनेको विभिन्न सेवाहरुलाई एकीकृत गरेर प्याकेज बनाइको छ । जस्तो कि एउटा ४० दिनको प्याकेज हुन्छ । यसमा ‘वान टु वान सेसन’, ‘फेस टु फेस’, म्यासेज लगायतका सुविधा हुन्छन् । यसमा विभिन्न तरिकाले छलफल भइरहेको हुन्छ । यसको मूल्य ४ हजार ५ सयदेखि सुरु भएर १० हजारसम्म छन् । यो ६ महिनासम्म सेवा दिन सकिन्छ ।
‘फेस टु फेस सेसन’ अर्थात भेटेर लिने सेवा पनि रहेको छ । तर, अनलाइन सेवालाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले भेटेर लिने सेवाको लागि अलि बढी शुल्क राखिएको अधिकारी बताउँछन् ।
कसैलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन छ भने त्यस किसिमको विरामीको लागि पनि विभिन्न प्याकेज बनाइएको छ । करियर डिसिजनको लागि पनि प्याकेज नै बनाएको अधिकारीले बताए ।
कसैलाई एन्जाइटी छ, मन डराइ रहन्छ, सुत्न गाह्रो हुन्छ भने काम एण्ड रिल्याक्ससेसन प्योकेज छ । ‘हाम्रो अध्ययनले के भन्छ भने हप्ताको एक चोटी गरेर पाँच सेसन भयो भने ठिक हुदोरहेछ,’ अधिकारीले भने ।
यि प्याकेज लिँदा सम्बन्धि विज्ञसँग सम्पर्क भएर कुराकानी सुरु हुन्छ । कुनै कुनै प्याकेजमा ‘फेस टु फेस’ पनि भेट्नु पर्ने हुनसक्छ । भेट्ने सुविधा पनि छ ।
के माइक्रोसफ्टले बन्द गर्दैछ स्काइपी ? विन्डोज ११ बाट किन हटाइयो ?
विश्वकै पहिलो एन्टीभाइरस म्याकाफीका निर्माताले गरे जेलभित्र आत्महत्या